बैंकको जागिर खोजीमा हुनुहुन्छ ? एनआइसी एसियाले दिँदैछ जागिर | Ratopati
बैंकको जागिर खोजीमा हुनुहुन्छ ? एनआइसी एसियाले दिँदैछ जागिर
काठमाडौं–बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रसँग सम्वन्धित बिषयमा अध्ययन गरेर जागिरको पर्खाइमा बसेका वा अध्ययनकै क्रममा रहेकाका लागि खुसीको खवर छ । बैंकमा जागिर खाने इच्छाशक्ति भएकालाई अव एनआईसी एसिया बैंकले जागिर दिने भएको हो ।
बैंकले क्षेत्रीय शाखाहरु मेची, कोशी, सगरमाथा, जनकपुर, धौलागिरी, नारायणी, गण्डकी, लुम्विनी, भेरी, राप्ती, सेती, महाकाली र बागमतीमा २ सय जना टे«नि एसिस्टेन्ट माग गरेको हो । यसका लागि १८ बर्ष उमेर पुगेको र ३० बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
बैंकका अनुसार स्नातक उत्र्तिणले यो जागिरका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । आवेदकले (डव्लुडव्लुडव्लू मेरोजव डटकम÷एनआईसी एसिया) वाट अनलाइन आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ । यो आवेदनका लागि आगामी साउन ८ गतेसम्म म्याद छ ।
सिटिजन्स बैंकले माग्यो विभिन्न १० पदमा कर्मचारी